चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा । प्रसिद्ध कालिञ्चोक मन्दिर क्षेत्रमा विहिवार राति देखि लगातार हिमपात भइरहेको छ । लगातारको हिमपातका कारण अत्यधिक चिसो बढेपनि कालिञ्चोकको कुरी क्षेत्रमा झण्डै चार हजार पर्यटक रमाईरहेको
लगातार बर्षा हुदाँ बाख्रा पाल्ने किसान प्रभावित
कृष्णप्रसाद अधिकारी, दैलेख । दैलेखमा लगातार विहीबारबाट वर्षा भइरहेको बर्षा सँगै दैलेखका विभिन्न भागमा हिमपात भइरहेकोले दैलेखका विभिन्न ठाउँमा बाख्रा पाल्ने किसानको किसानहरुको जनजिवन प्रभावित भएको छ । बर्षा भएसँगै
‘बैंकहरुले कृषिमा ऋण दिनै मान्दैनन’
मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार विकास तथा बाणिज्य बैकहरुले ऋण लगानी नगरेको युवा कृषकहरुले बताएका छन् । विकास बैकहरुले लगानी गरेका ऋणमा पनि सहजता नभएको उनिहरुले
पर्यटकिय गन्तव्य नागथलि गुम्बाको आफ्नै महत्व…
सरस्वती न्यौपाने, रसुवा । जिल्लाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर १ थुमन गाउँदेखी दुई घण्टाको उकालो गएपछि नागथलि गुम्बा पुग्न सकिन्छ । समुन्द्री सतहदेखि ३ हजार ३ सय ३० मिटरको उचाइमा
मकवानपुरमा तोकिए ३० पर्यटकीय गन्तव्य
नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा। मकवानपुरका ३० पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरिएका छन्। जिल्लाका १० पालिकाका तीन÷तीन पर्यटकीयस्थल पहिचान गरी पर्यटकीय गन्तव्य निर्धारण गरिएको हो। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी हरेक पालिकाबाट तीन/तीनवटा पर्यटकीयस्थल
सुकानाउलाका सुन्तलाले कहिले पाउँछ बजार ?
मानबहादुर बोहरा, बझाङ बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका वडा वडा नं. ८ सुकानाउलाका कृषक मानबहादुर बोहराले बारीमा बन्दा, काउली, रायो लगाएतको तरकारी फलाएका छन् । उनले टनेलभित्र लटरम्म हुने गरी गोलभेडा पनि
७७ वटै जिल्लामा कृषि बीमा पुर्याउन बीमा कम्पनीलाई भागबन्डा
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। कृषि बीमाको पहुँचमा वृद्धि गर्न बीमा कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई जिल्लागत रूपमा भाग लगाएका छन्। समितिले २० निर्जीवन कम्पनीहरूलाई जिल्लागत रूपमा भाग लगाइदिएको बीमा
माघ पहिलो साताभित्र उखु किसानको रकम भुक्तानी हुने
भूपराज बस्याल, काठमाडौ । उखु किसानको बाँकी रहेको बक्यौता रकम सरकारले माघ पहिलो साताभित्र तिर्ने भएको छ। शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आन्दोलनरत उखु किसानहरूबीच भएको पाँच बुँदे
भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा राजदूतावासभित्र छुट्टै डेक्स
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। नेपाल भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय समिति कुवेतले त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासमा छुट्टै डेक्स राखेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ
बैतडीमा सुन्तला लोप हुदैं
विनोद सिंह विष्ट, बैतडी । बैतडी सुन्तला उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रुपमा मानिए पनि यो क्षेत्रमा सुन्तला लोप हुन थालेको छ । सुन्तलाबाटै जिविकोपार्जन गर्ने किसानहरु अहिले समस्यामा परेका छन् ।
उखु किसानको आन्दोलनप्रति घरेलु महासंघको एक्यवद्धता
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। उखु किसानहरूको माग प्रति नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले ऐक्यवद्धता जनाएको छ।विगत चार वर्षदेखि चिनी मिललाई उखु बिक्री गरेका किसानले हालसम्म पनि उखुको भुक्तानी नपाएकोले देशको
छङगम देविको महिमा र महत्व…
सरस्वती न्यौपाने, रसुवा । गोसाइकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर–६ बोकेझुण्डास्थित छङगम डाँडामा अवस्थित छङगम देविको महिमा र महत्व बेग्लै रहेको छ । बोकेझुण्डा निवासी लवाङ ग्याल्बो घलेकाअनुसार परापुर्वकाल देखिकै आफै उत्पति
पाल्पामा किवीको व्यवसायीक खेति सुरु, आयआर्जनसगैँ रोजगार पनि गाउँमै
न्युज अफ नेपाल, पाल्पा । पाल्पामा किवीको व्यवसायीक खेति सुरु गरीएकोे छ । स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै पोषिलो र औषधीय गुण समेत भएको फलका रुपमा चिनिने र विश्वभर माग भइरहने यस
किसानले आन्दोलनका नाममा उत्पादन रोक्न हुँदैन : मुख्यमन्त्री पोखरेल
नेपाल समाचारपत्र, बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दुग्धजन्य वस्तुको विविधिकरण तथा बान्ड बनाउनपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कुनै पनि वस्तुप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढ्नुपर्ने भन्दै उपभोक्ताको मन जित्नको
प्याकेजिङ नहुँदा टिमुरको मुल्य ह्वात्तै घट्यो, मर्कामा किसान
न्युज अफ नेपाल, सल्यान । सल्यानमा टिमुरले मुल्य नपाउँदा किसानहरुले सस्तो मुल्यमा बिक्रि गर्न बाध्य भएका छन् । ब्यवसायीक रुपमा टिमुर खेतिगर्दै आईरहेका किसानहरु यस बर्ष टिमुरले मूल्य नपाएपछि समस्यामा
‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ को तयारी तिब्र
मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । भ्रमण वर्ष २०२० मनाउन गठन भएको जिल्ला स्तरीय, नगर स्तरीय र गाउँपालिका स्तरीय समितिहरुले तयारी थालेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति, १३ वटै स्थानीय तह, विभिन्न
पर्यटकीय, साँस्कृतिक महत्वको लाङटाङ पदमार्ग र एक सय आठ कुण्डको अवलोकन गरौं
सरस्वती न्यौपाने, रसुवा । देशकै आर्कषक र पर्यटकीय हिसाब र धार्मिक साँस्कृतिक तामाङ हेरिटेजको महत्व बोकेको रसुवामा लाङटाङ पदमार्ग र एक सय आठ कुण्डको अवलोकन गर्न जरुरी छ । गोसाइकुण्ड
भ्रमण बर्षको नयाँ गन्तव्यः पहराको एउटै ढुङ्गामा सात कुण्ड
चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा । सु्न्द्रावतीका खड्गबहादुर शिवाकोटीले ६० बर्ष अघिको एउटा घट्ना सम्झिए । सुन्द्रावती सेतिदेवीको महिमा बर्णन गर्दै उनले भने – म त्यस्तै १२ बर्षको थिए, हाम्रो ६० वटा
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफ्याड) ले मुलुकका साना किसानको उत्पादन बढाउन जोड दिइरहेको बताएका छन् । यी दुई निकायले आज